नेपाली फुटबल फ्यानका लागि खुसीको खबर : एटलेटिको म्याड्रिडले नेपाली क्लबलाई सहयोग गर्ने ! – Etajakhabar
नेपाली फुटबल फ्यानका लागि खुसीको खबर : एटलेटिको म्याड्रिडले नेपाली क्लबलाई सहयोग गर्ने !
स्पेनीस क्लब एटलेटिको म्याड्रिडले नेपाली फुटबलको विकासमा सहयोग पुर्याउन काठमाडौंको वेस्ट काठमाडौं फुटबल क्लबसँग सहकार्य गर्ने भएको छ । एटलेटिको म्याड्रिडले आफ्नो फाउन्डेसनमार्फत वार्षिक क्लबको बजेटको १ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । सोहि अनुसार क्लबले पाँच देशमा आफ्नो फाउन्डेसनमार्फत सहयोग गर्दै आएको छ । नेपालको प्रतिनिधित्व भने वेस्ट काठमाडौं फुटबल क्लबले गर्ने भएको छ ।
वेस्ट काठमाडौं र एटलेटिकोबीच विगत ८ महिनायता यसबारे छलफल भइरहेको थियो । शुक्रबार दुई क्लबबीच औपचारिक रुपमा सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रम पनि हुँदैछ । त्यसअघि एटलेटिकोका प्रतिनिधिले नैकापस्थित क्लबको खेल मैदान निरीक्षण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
कार्यक्रमअनुसार फाउन्डेसनले १० देखि १५ वर्षसम्मका ८० खेलाडीको फुटबल विकासमा सहयोग पुर्याउनेछ । यसका लागि आवश्यक पोस्ट, नेट, बल, कोन लगायत खेल सामग्री पनि क्लबले प्रदान गर्नेछ । यसबाहेक खेलाडीहरुको खानपिनमा पनि क्लबले सहयोग दिनेछ । एटलेटिकोले आफ्नो लोगो अंकित जर्सी यसअघि नै काठमाडौंका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, कार्तिक ०६, २०७५ समय: १७:०१:१०